Phungwayo: IBucs isilutholile uzinzo nobumbano | isiZulu
Phungwayo: IBucs isilutholile uzinzo nobumbano
OwePirates uthi izinto azihlangani kahle
Johannesburg – Isitobha se-Orlando Pirates, u Patrick Phungwayo, uthi iqembu lakhe limuzwa kahle umqeqeshi uKjell Jonevret, futhi selibumbene kakhulu manje ngaphansi kwesandla salo mqeqeshi waseSweden.
IPirates isikwazile ukuphendula amatafula selokhu kwafika uJonevret ngoFebhuwari njengoba emidlalweni engu-8 isahlulwe umdlalo owodwa nje kuphela.
OLUNYE UDABA: Abaphathi beChiefs kabajiki kolwezicoco
Ngemuva kokuwina imidlalo yabo emine yakamuva, amaBhakabhaka asekwazi ukuthi adlulele esigabeni sama-quarter-finals kumqhudelwano weNedbank Cup, kanti ngaphezu kwalokho aphinde anyukela nasendaweni yesi-9 kwi-log ye-Absa Premiership, nalapho eshoda khona ngephuzu elilodwa nje ukuthi angene emaqenjini angu-8 ahamba phambili.
Ngaphezu kwalokho, kubukeka sengathi amaSea Robbers aseluqinisile nodonga lwawo lwasemuva ngemuva kokushaywa ngenqwaba yamagoli ekuqaleni kwesizini njengoba esangenelwe yigoli elilodwa emidlalweni emithathu edlule.
“Uma ubheka uhlelo lwethu kanye nendlela esidlala ngayo, kuncike kakhulu kuzinzo kanye nokubumbana,” uPhungwayo utshele iSowetan.
Lo mdlali oneminyaka engu-29 ubudala nowayegijima kuBidvest Wits, uthi uJonevret ukwazile nokubhalansisa ukusebenza kanzima kanye nentokozo.
Uthi yize noma lo umqeqeshi engesiyena umuntu ongabafakela ingcindezi, kodwa nabo njengabadlali bayazi ukuthi kusho ukuthini ukudlalela iPirates.